Kulli Intlanzi | Ngeentlanzi
Ukuba ungomnye wabo bane-akwariyam kwaye ujonge iintlanzi ezizolileyo nezinoxolo, onokuhlala nezinye izilwanyana ngendlela ekhululekile, ngaphandle kokubonisa naluphi na uhlobo lobundlongondlongo okanye ingxaki yendawo, mandikuxelele ukuba eyona ntlanzi ilungele wena kunye nedama lakho kulli iintlanzi. Uhlobo lwendalo eThailand naseIndonesia, elithanda ukwabelana ngendawo yalo nezinye iintlanzi kunye nezinye izilwanyana, ngokungafaniyo neentlanzi ezininzi esinokuba nazo kwi-aquarium. Ngenxa yobume bayo obukhethekileyo nobunobungane, kuyacetyiswa kakhulu ukuba yabelane ngendawo yokuhlala kunye neentlanzi ezincinci ezincinci.
Ukuba uyayibona le ntlanzi, xa uyijonga kuqala, iya kubonakala njengenyoka, kuba iyintlanzi ende (ingalingana ukuya kwiisentimitha ezili-15 ubude), inamaphiko amancinci kakhulu, aphantse angabonakali, kunye nentloko emilisiweyo. intloko yenyoka (ijikelezwe). Kwelinye icala, umzimba wayo umnyama kwaye ugqunywe ngamabhanti amnyama, orenji okanye tyheli, agquma umzimba, nto leyo eyenza ezi zinto iintlanzi ngakumbi njengeenyoka.
Ukutyiswa kwezi zilwanyana kulula, kuba nangona zitya iintlanzi ezi-omnivorous, zikwamkela ngovuyo ukutya kweflake, izityalo, imibungu yengcongconi, okanye ukutya kwentlanzi. Ngokubanzi i KulliBakhetha ukuhlala emazantsi e-aquariums, apho bajonge ukutya kwabo kwaye bazifihle kwaye badlale phakathi kwamatye, amakhorali kunye ne-algae.
Ukuba ufuna ukuba nesi silwanyana, kubalulekile ukuba uyithathele ingqalelo into yokuba, ukuba nayo ikwimeko egqibeleleyo, i-aquarium kufuneka ibenekhulu leelitha ubuncinci, ibenezityalo, amatye nezinye izinto ukuze iintlanzi ezincinci zidlale kwaye zikhusele emini. Kuya kufuneka ukhathalele nobushushu bamanzi, obufanele ukuhlala bujikeleze i-24 degrees celcius, kunye nokukhanya okungacacanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Kulli Intlanzi
Iintlanzi zam ze-kulli zatsiba ziphuma etankini zaza zafa ngenxa yesibetho, kutheni itsibela ukuba ihlala isezantsi?
UJose Calatayud ujonge sitsho
Molweni, molweni nonke kubo bonke abantu, bendifuna ukukubuza ukuba ngaba amaKulli kwaye kungenzeka ukuba nditya umntwana ongumGuppi
Phendula kuJose Calatayud mira